ပလပ်စတစ်ကြိုးများ၊ သတ္တုကြိုးများ၊ သစ်သားကြိုးများ - Lipu
ကျွန်ုပ်တို့သည်ကမ္ဘာတဝှမ်းရှိစူပါမားကက်များထံမှအရောင်းရဆုံးအဝတ်အိတ်များကို ပေး၍ အဆင့်မြင့်ထည်ထည်ရှိသောသစ်သားချိတ်များအတွက်အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဖက်ရှင်စတိုးဆိုင်များကို ၀ န်ဆောင်မှုပေးသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်များသည်စူပါမားကတ်မြှင့်တင်ရေး၊ လက်ကားရောင်းဝယ်မှု၊ အွန်လိုင်းလုပ်ငန်းရှင်၊ ဖက်ရှင်စတိုး၊ ဟိုတယ်၊ အဝတ်လျှော်ခန်းစသည်တို့
ကျွန်ုပ်တို့သည် BSCI / ISO9001 / FSC ကဲ့သို့သောလက်မှတ်များရရှိထားပြီးဖြစ်သည်။
နှစ် ဦး နှစ်ဖက်အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှု၏စီးပွါးရေးနိယာမကိုလိုက်နာခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့၏အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်များ၊
လက်ကားသတ္တု H ...
သင်ဗီရိုအာကာသကိုစိတ်ပူနေလျှင်အလွန်ရှုပ်ထွေးပြီးလူစုလူဝေးများလား။ အကယ်၍ သင်ဟာကြိုးဆွဲကြိုးတစ်ချောင်းလိုမိုးသည်းထန်တဲ့အဝတ်အစားတွေကိုဆွဲထားနိုင်သလိုနေရာချွေတာနိုင်ရင်အရောင်အမျိုးမျိုးနဲ့ချိတ်ဆွဲထားလို့ရရင်ဗီရိုကိုပိုပြီးလှပအောင်လုပ်နိုင်တယ်။ ဒီနေရာမှာသင့်ရဲ့ဗီရိုအတွက်ရွေးချယ်စရာကောင်းသည်။
Hometime စက်ရုံ ...
Hometime စက်ရုံ Eco Friendly ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ဂျုံမှုန့်အဝတ်အစားချိတ်ဆွဲပစ္စည်းအမှတ် - P-43010-WS ကုန်ပစ္စည်းအမည် Hometime စက်ရုံပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေသောဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ဂျုံစပါးအဝတ်အစားများချိတ်ဆွဲထားသည့်ပစ္စည်းများ Wheat Straw Fiber + PP MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L430 * T10 * H220 MM အရောင်သဘာဝသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက် Hoo ...
Ultra Thin Space Saving ရော်ဘာ U-Slide ပလတ်စတစ်အိတ်များမပါပါ။ အမှတ် - P-4122505-TPR ကုန်ပစ္စည်းအမည် Ultra ပါးလွှာသောနေရာလွတ်ချော်ခြင်းပလပ်စတစ်မပါသည့် U-Slide ပလတ်စတစ်သံပြားများ ABS + TPR MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L410 * T5 * H225 MM အရောင် ဓာတ်ပုံသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ထားသည့် 360 ° Chro ...
Zara စတိုင် PP ပ ...
Zara စတိုင် PP ပလပ်စတစ်အိတ်များအ ၀ တ်အထည်အ ၀ တ်အစားဘောင်းဘီတိုစကတ်များနှင့်သတ္တုချိတ်ဖြင့်ပြသထားသောပစ္စည်းအမှတ် - P-4552311-PP ထုတ်ကုန်အမည် Zara စတိုင် PP ပလပ်စတစ်အိတ်များအ ၀ တ်အထည်အ ၀ တ်အထည်အ ၀ တ်ဘောင်းဘီတိုသတ္တုချိတ်ပစ္စည်းဖြင့်ပြသထားသော PP MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L455 * T11 * H230 MM ဗိုလ်မှူး ...
အကြမ်းခံ Ultra Sli ...
Non Slip Rubber Coated ABS ပလတ်စတစ်အဝတ်အထည်များအမှတ်အသားအမှတ် - P-42006-ABS ကုန်ပစ္စည်းအမည်အကြမ်းခံ Ultra ပါးလွှာသောကတ္တီပါအာကာသသိမ်းဆည်းခြင်း Non Slip Rubber Coated ABS ပလတ်စတစ်အ ၀ တ်အထည်ပစ္စည်းများ ABS + ရော်ဘာအကာအကွယ်ပစ္စည်းများ MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L420 * T6 * H230 MM အရောင် အနက်ရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ထားသော ...
Eco-Friendly ပလပ်စတစ်အဝတ်အထည်ဘောင်းဘီအတွက်အဝတ်အထည်ဘောင်းဘီအတွက်ပစ္စည်းအမှတ် - P-44510-WS ကုန်ပစ္စည်းအမည် Eco Friendly ပလပ်စတစ်ဂျုံဘောင်းဘီရှည်အ ၀ တ်အထည်ပစ္စည်းများဂျုံစေ့စစ်အမျှင် + PP MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား 445 * 230 * 10 CM အရောင်သဘာဝသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ချိတ် ...
Hometime စက်ရုံ Eco Friendly ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်စက်ရုံ ...
Hometime စက်ရုံ Eco Friendly ဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ဂျုံမှုန့်အဝတ်အစားချိတ်ဆွဲပစ္စည်းအမှတ် - P-43010-WS ကုန်ပစ္စည်းအမည် Hometime စက်ရုံပတ် ၀ န်းကျင်နှင့်အဆင်ပြေသောဆွေးမြေ့ပျက်စီးနိုင်သည့်ဂျုံမှုန့်အဝတ်အထည်များဆုံလည်စည်းပစ္စည်းများကျောက်စရစ်ခဲ Fiber Fiber + PP MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L430 * T10 * H220 MM အရောင်သဘာဝသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ချိတ် 360 ° Chrome သတ္တုချိတ်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်အထုပ် ၁၀၀ PCS / CTN အသုံးပြုမှုရှပ်အင်္ကျီအကျီများအင်္ကျီဘောင်းဘီဘောင်းဘီ / ISO9001 နမူနာနေ့များ ၇-၁၀ ရက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၃၀-၃၅ ရက်သို့မဟုတ်ပေါ်အခြေခံသည် ...
လက်ကားရောင်စုံရောင်ကြိုးကြိုးသတ္တုကုတ်အင်္ကျီချိတ်ဆွဲပစ္စည်းအမှတ် - M-3000405V-BC ထုတ်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းအမည်အရောင်ရောင်စုံကြိုးဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောသတ္တုကုတ်အင်္ကျီချိတ်ပံပစ္စည်းဝါယာကြိုး + Polyester MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L405 * T4 * H210mm အရောင်ဓာတ်ပုံပြသထားသည့်အတိုင်းသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ချိတ်ထားသည့်ပစ္စည်းများ 180 PCS / CTN အသုံးပြုမှုရှပ်အင်္ကျီအဝတ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် BSCI / ISO9001 နမူနာနေ့ရက်များ ၇-၁၀ ရက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၃၀-၃၅ ရက်သို့မဟုတ်အမှာစာအရေအတွက်အပေါ် အခြေခံ၍ FOB ဆိပ်ကမ်း၊ ရှန်ကျန်း၊ တရုတ်ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း T / T, L / C OEM / ODM Accepta ...
Hometime စက်ရုံ Non Slip အနက်ရောင်ကြိုးကြိုး ...
Hometime စက်ရုံ Non Slip အနက်ရောင်ကြိုးချည်ကြိုးသတ္တုဝါယာကြိုးချိတ်ဆွဲပစ္စည်းအမှတ်: M-4000405V-BC ထုတ်ကုန်အမည် Hometime စက်ရုံ Non Slip အနက်ရောင်ကြိုးချည်ကြိုးသတ္တုဝါယာကြိုးချိတ်ဆွဲပစ္စည်းများဝါယာကြိုး + Polyester MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား L405 * T5 * H200mm အရောင်အနက်ရောင်သို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ချိတ်အထုပ် 180 PCS / CTN အသုံးပြုမှုရှပ်အင်္ကျီအကျီအင်္ကျီဘောင်းဘီဘောင်းဘီများဝတ်စုံလက်မှတ် BSCI / ISO9001 နမူနာနေ့ရက်များ 7-10 ရက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် 30-35 ရက်သို့မဟုတ်အမိန့်အရေအတွက်ပေါ်အခြေခံပြီး FOB ဆိပ်ကမ်း: ရှန်ကျန်း, တရုတ်ငွေပေးချေမှု te ...
Hot Sale စက်ရုံအဆင့်သတ်မှတ်ထားသည့် Hangers သန့်ရှင်းရေးစက်ရုံ ...
အပူအအေးခံစက်အဝတ်အစားအဝတ်လျှော်အ ၀ တ်လျှော်ပစ္စည်းအမှတ် - M-2032410V-PE ကုန်ပစ္စည်းအမည် Hot Sale စက်မှုစံချိန်စံညွှန်းများအခြောက်အခြောက်အဝတ်အထည်များသန့်ရှင်းရေးအဝတ်လျှော်သံဆွဲကြိုးပစ္စည်းများကြိုး + PE MOQ 10000 PCS အရွယ်အစား L410 * T3.2 * H215mm အရောင်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ချိတ်အထုပ် 500 PCS / CTN အသုံးပြုမှုအဝတ်လျှော်စက်၊ အိမ်အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ် BSCI / ISO9001 နမူနာနေ့ရက်များ ၇-၁၀ ရက်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၃၀-၃၅ ရက်သို့မဟုတ်အမှာစာအရေအတွက်အပေါ် အခြေခံ၍ FOB ဆိပ်ကမ်း: Shenzhen, China ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း T / T, L / C ...
စက်ရုံလက်ကား PE PE Coated Wire Hanger အဝတ်အထည်များ ...
စက်ရုံလက်ကား PE အမိုးဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောဝါယာကြိုးကွင်းကြိုးအ ၀ တ်အထည်သံကြိုးများအမှတ်အသားအမှတ် - M-2030410-PE ထုတ်ကုန်ကုန်ပစ္စည်းအမည်စက်ရုံလက်ကား PE အမိုးပါးလွှာချိတ်တွဲဝါယာကြိုးအ ၀ တ်အထည်သံကြိုးသံသတ္တုကြိုး + PE MOQ 10000 PCS အရွယ်အစား L410 * T3 * H215mm အရောင်စိတ်ကြိုက်ချိတ်ချိတ်အထုပ် ၅၀၀ PCS / CTN သို့မဟုတ်သင်၏တောင်းဆိုမှုများအရအသုံးပြုမှုအဝတ်လျှော်မှု၊ အိမ်အသိအမှတ်ပြု BSCI / ISO9001 နမူနာနေ့ရက်များ ၇-၁၀ ရက်ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအချိန် ၃၀-၃၅ ရက်သို့မဟုတ်အမှာစာအရေအတွက်ပေါ် မူတည်၍ FOB ဆိပ်ကမ်း - ရှန်ကျင်း၊ တရုတ်ငွေပေးချေမှုသက်တမ်း T / T, L / C OE ...
Cl အတွက် Eco ဖော်ရွေသောပလပ်စတစ်ဂျုံကောက်စ ...
Eco Friendly ပလပ်စတစ်အဝတ်အထည်ဘောင်းဘီအတွက်အဝတ်အထည်ဘောင်းဘီအတွက်ပစ္စည်းအမှတ် - P-44510-WS ကုန်ပစ္စည်းအမည် Eco Friendly ပလပ်စတစ်ဂျုံဘောင်းဘီရှည်အ ၀ တ်အထည်ပစ္စည်းများဂျုံစတာဖိုက်ဘာ + PP MOQ 3000 PCS အရွယ်အစား 445 * 230 * 10 CM အရောင်သဘာဝသို့မဟုတ်စိတ်ကြိုက်ချိတ် 360 ° Chrome သတ္တုချိတ် (သို့) စိတ်ကြိုက်အထုပ် ၁၀၀ PCS / CTN အသုံးပြုမှုအဝတ်၊ အင်္ကျီ၊ ရှပ်အင်္ကျီ၊ ဘောင်းဘီများ BSCI / ISO9001 / FSC နမူနာနေ့ရက်များမှ ၃-၇ ရက်အတွင်းထုတ်လုပ်မှု ...